2018 Torolàlana ho an'ny salasary ara-batana ara-batana | Ny salanisa ara-panatanjahan-tena PT
Salary ara-pahasalamana ara-batana: Torolàlana handoavana toerana ho an'ny PT
Salary ara-pahasalamana: Fitsipika iray avy amin'ny fanjakana
Fanofanana ara-pahasalamana ara-panatanjahan-tena: Torolàlana momba ny inona no tokony hodinihina
Inona no atao hoe Animal Therapist?
Mpiara-miasa ny dokotera miasa mafy
Ny lisitry ny fitaovana fitsaboana ara-batana
Inona no atao hoe mpitsabo ara-batana?
Afaka mahazo tombontsoa amin'ny fitsaboana ve ianao?
Ace ny fanadihadiana ara-batana ara-batana
Fikarohana asa ara-batana ara-batana
Vonona ho amin'ny sekoly fitsaboana ara-batana ve ianao?
Salary ara-pahasalamana ara-pitsaboana
The karama mpitsabo aretin-tsaina (PT) is variable, depending on various factors, such as education, location, experience and skill sets. So, how much actually does a physical therapist make?
Araka ny Bureau of Statistics Statistics, ny average pt salary for physical therapist and sports therapist in the United States dia $ 86,520 isan-taona, which is 103% higher than the average salary of Americans. The median pay for a physical therapist is $41.59 per hour, $1,663 per week and $7,210 per month. There is variance within the different disciplines such as a dedicated sports physical therapist.
Ity ny salanisan'ny PT salanisa amin'ny fidiram-bolan'ny firenena:
Salama isaky ny herinandro
Ny vola miditra isan-taona
Physiotherapeutiker $41.59 $1,663 $7,210 $86,520
2 Salary isan-taona: mari-pankasitrahana sy zokiolona
2.1 Fanombohana karama: inona no azonao antenaina amin'ny fidirana
2.2 Ny fanjakana be mpifidy indrindra: inona avy ireo faritra manana karama ambony indrindra
2.2.2 Non-metropolitan Area
3 Toeram-pihariana avo lenta: ny karazana fiantsoana mety handoa bebe kokoa
4 Ireo dokotera mpitsabo ara-batana rehetra ve?
5.1 Maro ny antony tokony hodinihina
6 Karazana fitsaboana ara-batana
6.1 Ny fampiroboroboana ny famoronana asa vaovao
7 Fahaiza-mamaritra ny toerana ho an'ny vola miditra
Noho ny habetsahan'ny fampahalalana hita ao amin'ny aterineto amin'izao fotoana izao, ny olona dia afaka mahita izay zavatra tadiaviny ary mila mahafantatra momba ny asa iray izay liana amin'ny fanenjehana. Amin'ny fahitana ny isan'ny asa nomanina nandritra ny taona iray manokana mba hahazoana filazalazana momba ny andraikitry ny asa atao, ny fampahalalana izay hitan'ny olona dia mety ho sarobidy. Noho izany, raha liana amin'ny fahafantarana ny zava-misy momba ireo mpitsabo ara-batana ara-batana sy ny zavatra ataony ny olona iray dia afaka mijery an-tserasera izy ireo mba hamita ny fikarohana ataony alohan'ny handraisany fanapahan-kevitra hahazoany mari-pahaizana.
Mba hanombohana, ny ankamaroan'ny olona dia liana amin'ny fahafantarana bebe kokoa ny zavatra ataon'izy ireo, firy ora maro izay iasan'izy ireo, inona ny karazana marary hitany, ny karazana tontolo izay azony jerena sy ireo zavatra maro hafa afaka manampy azy ireo amin'ny fanapahan-kevitra raisina. Amin'ny alalan'ity lazaina ity, eto ny sasany amin'ireo heverina ho zava-misongadina momba ny hetsika momba ny hetsika vao haingana sy ireo fampahalalam-baovao mifandraika amin'izany.
Salary isan-taona: mari-pankasitrahana sy zokiolona
Ny PT iray voamarina dia afaka mahazo $ 60,600 farafahakeliny isan-taona, izay midika $ 29.13 isaky ny ora sy $ 5,050 isam-bolana. Ny zokiolona dia afaka manao $ 120,000 isan-taona eo anelanelan'ny toerana, ny traikefa, sns.
Fanombohana karama: inona no azonao antenaina amin'ny fidirana
Manomboka karama ho an'ny mpitsabo ara-batana eo ho eo no isan-annum $ 57,220 mikapoka ny ambony indrindra ny manodidina ny $ 105,900 isan-taona .. Ny mpanampy PT afaka manantena hanomboka amin'ny karama ny manodidina $ 34,735 mifindra any amin'ny faratampony ny $ 66,460 isan-taona.
Amin'ny toe-javatra sasany, ny olona dia mety tsy hahafantatra ny toerana hisy azy ireo rehefa hamita ny fianarany. Na izany aza, mety mbola te-hahafantatra ny vola azony izy ireo raha toa ka manohy izany asa izany. Ho an'ireo izay lavo amin'ity toe-javatra ity, misy ny vaovao azo omena azy ireo amin'ny vola miditra amin'ny vola miditra amin'ny vola miditra isan-taona. Ohatra, ny salanisan'ny salanisa isan-taona ho an'ny mpitsabo ara-batana dia $ $ 57,220 (full-time) na $ 34,735 (Tapa-potoana). Ilay olona ihany koa dia afaka manangona vola bebe kokoa raha te-hiasa ao amin'ny iray amin'ireo fanjakana mandoa be indrindra toa an'i Nevada. Amin'ireo tranga ireo, ny olona dia mahazo vola bebe kokoa 33% bebe kokoa noho ny miasa ao amin'io faritra io.
Ny fanjakana be mpifidy indrindra: inona avy ireo faritra manana karama ambony indrindra
The Silver State Nevada is the best-paying state for physical therapists. The average physical therapist salary in Nevada reaches up to $115,670 per year, which is approximately 33% higher than the mean PTs pay. Check out the remuneration level in your state, by clicking Eto.
Ho an'ny faritra metropolitan, Las Vegas is the highest paying city. Other choices are Fairbanks (Alaska), Jacksonville (Florida), Roanoke (Virginia) and McAllen-Edinburg-Mission (
Ho an'ny faritra tsy metropolita, miasa amin'ny Upper East Shore, Maryland or Avaratra-andrefana Iowa can bring you income as high as $118,000 per annum.
Farany Atsinanana Atsinanana Maryland $57.65 $2,306 $9,993 $119,920
Lower Savannah Carolina Atsimo $54.62 $2,185 $9,467 $113,600
Delaware County Delaware $51.54 $2,062 $8,933 $107,200
Toeram-pihariana avo lenta: ny karazana fiantsoana mety handoa bebe kokoa
Home services dia ny indostria mpamatsy vola tsara indrindra, araka ny asehon'ny tabilao etsy ambany. Ny karama dia afaka hahatratra $ 95,440 isan-taona ($ 45.88 isan'ora).
Home Care Services $45.88 $1,835 $7,953 $95,440
Tale manampahaizana momba ny siansa sy teknika $44.31 $1,773 $7,681 $92,170
Administratifa sy fanohanana ary ny fitantanana sy ny fanarenana ny fako $44.26 $1,771 $7,673 $92,070
Sampandraharaham-panjakana sy fanohanana $44.26 $1,771 $7,673 $92,070
Asa fanompoana $44.25 $1,770 $7,669 $92,030
Loharano: Statistikan'ny Biraon'ny Etazonia
Valam-pejy: US Dollars (USD)
Ireo dokotera mpitsabo ara-batana rehetra ve?
Talohan'izay, raha nanontany azy ny olona iray raha dokotera izy ireo, dia ho eny ny valiny, saingy tsy hoe nampihatra dokotera izy. Ankehitriny, anefa, tsy dia mahazatra loatra amin'ny asa ny manova ny fomba fijerin'izy ireo fotoana fohy. Raha ny marina, noho ny andraikitra tafiditra, ireo matihanina toy ny mpitsabo ara-batana dia hivoatra ny foto-drafitrasa fanampiny sy ny fepetra momba ny fahazoan-dàlana. Noho izany, ho anareo izay te haharaka ny fiovana eo amin'ny farany indrindra Fitsaboana ara-batana, dia mety ho te hahalala fa matihanina io ankehitriny, toy ny 2015, ao anatin'ny ara-batana ny Dokotera Fitsaboana Program.
Ity fandaharanasa ity dia natao hanomanana ny mpianatra amin'ny fepetra takiana hisintonana azy ireo. Amin'ny lafiny manokana, ho an'ny fanadinana fahazoan-dàlana momba ny fitsaboana ara-batana izay omena amin'ny fanjakana dimampolo rehetra. Rehefa vita ny Dokotera momba ny fitsaboana ara-batana, dia manohy ny fampiofanana azy ireo koa ny individualmay amin'ny fonenana sy ny fiarahana. Amin'ny fampiharana ireo fenitra vaovao ireo, ny taona 2020 dia voamarika amin'ny taona izay heken'ny mpitsabo ara-batana ho mpitsabo fitsaboana ara-batana.
Alohan'ny hanapahan-kevitry ny olona iray amin'ny karazana asa rehetra, ny iray amin'ireo zavatra voalohany tiany ho fantatra dia ny habetsahan'ny olona ao amin'ny orinasan'izy ireo no miantoka isan-taona. Soa ihany, misy ihany ny fampahalalana azo itokisana amin'ny aterineto izay afaka manampy amin'ny famaliana ireo fanontaniana sy fanontaniana hafa mifandraika amin'izany. Ny iray amin'ireo malaza indrindra, na izany aza, dia ny Birao ny Asa sy antontan'isa hatramin'ny sampan-draharaha ity governemanta ity famaritana asa fanampiana, ny fomba fijery momba ny hoavy sy ny ankehitriny Nahazo vola ao amin'ny toerana manerana ny United States.
Maro ny antony tokony hodinihina
Mba hamahana izany fanontaniana izany, ohatrinona ny fitsaboana ara-batana no atao isan-taona? Zava-dehibe ny manamarika fa ny valiny dia afaka miovaova be mifototra amin'ny maro anton-javatra ao anatin'izany ny jeografika toerana izay olona miasa, ny orinasa izay mampiasa azy ireo (izany hoe an-trano fikarakarana ara-pahasalamana, asa services, fitantanana sy ny fanohanana ny asa, Management sy Teknika Consulting Services sy ny toy izany.
Noho izany, raha liana amin'ny karama mety ho azony atao ny olona iray, dia mila mandinika akaiky ireo fepetra ireo izy ireo mba hahazoana fanazavana marina momba ny karama. Ohatra, raha olona iray no nokaramaina hiasa tao Jacksonville, Florida, ny karama isan-taona dia ho $ 115,440 na raha misafidy ny hiasa any Roanoke, Virginia, ny karama dia ho $ 110,680.
Hevitra iray manan-danja iray hafa izay tsy maintsy fantatry ny olona iray raha ny fikarohana momba izany dia karazana mpitsabo ara-batana izay tokony hofidiana. Na dia maro aza ny olona tsy mahafantatra izany, misy mpitsabo ara-batana ara-batana, mpitsabo arifomba, mpitsabo ara-pahasalamana,
Geriatric PT, Pediatric PT, PT neurological and so forth. Ny karazana tsirairay dia manana andraikitra voafaritra manokana amin'ny marary izay ataony. Noho izany, dia zava-dehibe ihany koa ho an'ny olona izay mitady ny mahita fa be mpitsabo ara-batana ho adiny iray na karama ara-batana teo an-tampon'ny mpitsabo karama ny mpitsabo ara-batana ao amintsika, hoy ny handinika lafin-javatra ireo talohan'ny vita ny fikarohana.
Ny fampiroboroboana ny famoronana asa vaovao
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny fiheverana momba ny asa sasany dia be lavitra noho ny hafa. Ny iray amin'izy ireo dia ireo mpitsabo ara-batana. Satria io sehatry ny indostria io dia mihamitombo be rehefa mandeha ny fotoana ary ny anjara andraikiny dia miditra amin'ny marary mahazo ny fitsaboana izay ilainy, fotoana tena tsara hiditra amin'io karazana fitsaboana io. Raha ny marina, ireo olona ao anatin'ireny asa ireny dia ho fantatra amin'ny hoe dokotera mpitsabo ara-batana efa hatramin'ny 2020. Noho izany, ireo olona liana amin'ny fitadiavana karazana asa toy izany dia hanana fahafahana maro hiasa amin'ny tontolo samihafa sy tontolo iainana isan-karazany, anisan'izany ny tolotra fitsaboana ao an-tokantrano, ny asa momba ny asa, ary koa ny hafa.
Fahaiza-mamaritra ny toerana ho an'ny vola miditra
Ankoatr'izany, raha ny karama raisin'ny olona iray dia fanapahan-kevitra iray, dia misy zavatra maro tokony ho fantany. Ohatra, ny fanjakana ambony indrindra amin'ny fitsaboana ara-batana dia azo jerena ety anaty aterineto mba hahafahan'ny olona mifidy sy misafidy ireo toerana izay tena tian'izy ireo hiasa. Ny fari-bola ho an'ireo karama ireo dia samy hafa koa ny fiovana satria misy karazany maromaro izay mamaritra ny fandaniana isan-taona, ny tahan'ny ora na ny isam-bolana.
Raha te-hanombantombana ity karama ity dia mila mahafantatra ny toerana misy ny toeram-pitsaboana ara-pahasalamana ny olona, ​​inona ny tontolo iainan'izy ireo izay hiasa (sampan-draharaha misahana ny fitsaboana amin'ny asa fanompoana) ary ny loham-pahefana manokana.